Izindlela Ezi-5 Eziphezulu Zokuthuthukisa Inqubo Yakho Yokukhokha Yeselula Martech Zone
Izindlela Ezi-5 Eziphezulu Zokuthuthukisa Inqubo Yakho Yokukhokha Yeselula
NgoLwesine, ngo-Okthoba 26, 2017 U-Eran Feinstein
Ama-Smartphones kanye namathebulethi amadivayisi aya ngokuya esetshenziswa abantu abawasebenzisa nsuku zonke. Uma kukhulunywa nge-ecommerce, izinkokhelo zeselula ziba inketho ethandwayo, ngenxa yokukhululeka nokulula kokwenza inkokhelo noma kuphi, nganoma yisiphi isikhathi, ngokuthepha nje okumbalwa. Njengomthengisi, ukuthuthukisa inqubo yakho yokukhokha ephathekayo kungukutshalwa kwemali okufanelekile okuzoholela ekwandeni ukwaneliseka kwamakhasimende, futhi ekugcineni - ukuthengisa okuningi.
Inqubo yokukhokha engelutho izokuvimba ekufinyeleleni kuzinjongo zokuthengiselana zeselula zomkhakha wakho futhi kungaholela ezinombolweni eziphakeme zokubuyiselwa emuva. Uma uzibonile lezi zimpawu, kubaluleke kakhulu kuwe ukuthi wenze ngcono. Kunezinyathelo ezimbalwa ongazithatha ukwengeza inqubo yokukhokha yeselula. Nazi ezinhlanu eziphezulu:
1. Dala Isiza Esinomusa
Lesi yisici esibucayi kakhulu ekwakheni inqubo yokukhokha yeselula ebushelelezi. Iwebhusayithi yakho kufanele iphendule - izenzele ukusetshenziswa kweselula ukuze abasebenzisi kungadingeki basondeze isithombe noma bachofoze izinkinobho ezincane. Amawebhusayithi angenzelwanga amadivayisi eselula ayakhathaza futhi angavimbela amakhasimende ekuqedeni inqubo yokukhokha ngokuphelele. Ngokuvumelana ne I-Adobe, abathengi abacishe babe ngu-8 kwabangu-10 bangayeka ukuzibandakanya nokuqukethwe uma kungakhombisi kahle kudivayisi yabo.
Idizayini ehlanzekile, encane, enezinkinobho ezinkulu nombhalo ofundeka kalula, izokwenza ikhasimende likwazi ukuqhubeka ngokushesha ngenqubo yokuthenga nokuthengiselana. Amanye ama-PSP anganikeza ngamakhasi wokukhokha aphethwe aklanyelwe ikakhulukazi abasebenzisi beselula.
Ngokungeziwe kuwebhusayithi ephathekayo, ungakha futhi uhlelo lokusebenza leselula. Abasebenzisi bangalanda uhlelo lokusebenza kumadivayisi wabo weselula bese beluvula ngompompi owodwa, ukugcina umkhiqizo wakho kutholakale kalula, 24/7.
2. Nikeza Izindlela Zokukhokha Zeselula
Kungabonakala njengokusho okusobala, kepha ukunikela izindlela zokukhokha zeselula kuyindlela enhle yokuheha amakhasimende ngamadivayisi eselula. I-PSP osebenza nayo kufanele ikwazi ukuhlanganisa izindlela zokukhokha zeselula, njengezikhwama zamaselula nemali yeselula, evumela abasebenzisi ukuthi bakhokhe ngezingcingo zabo. Ezinye izindlela zokukhokha, njengokusebenzisa ikhadi lesikweletu, zibandakanya ukufaka imininingwane ngesandla, okunzima esikrinini esincane futhi kuthatha isikhathi esiningi. Ngokuphambene, inkokhelo yeselula ingenziwa ngokuswayipha okumbalwa kanye nompompi. Ngokushesha inqubo yokukhokha, lapho kungenzeka khona ukuthi ikhasimende liwuqede, kunciphisa kakhulu ukulahlwa kwenqola yokuthenga.
3. Vumela ukuthengwa kwe-Omni-Channel
Ubuchwepheshe bukuyo yonke indawo - ungahle ube namakhasimende amaningi aqala ukuphequlula iwebhusayithi yakho ekhaya futhi afise ukuqeda ukuthenga kwawo usohambeni, ngomakhalekhukhwini wawo. Uma iziteshi zakho zokukhokha zihambisana, lokhu kuba yinkinga. Ucwaningo olwenziwe ngu I-Aberdeen Group ithole ukuthi izinkampani ezinamasu okubandakanya amakhasimende we-omni-channel zinenani lokugcinwa kwe-89%, uma kuqhathaniswa ne-33% kuphela ngaphandle. Isayithi lakho leselula noma uhlelo lokusebenza kufanele lifane nesiza sedeskithophu ngokubukeka. Kufanele futhi inikeze izindlela ezifanayo zokukhokha - khuluma ne-PSP yakho ukuqinisekisa ukuthi lokhu kungenzeka.
4. Qinisekisa ukuthi unokuphepha okuzinikele kwamadivayisi eselula
Ukuvikelwa kwenkohliso kubalulekile kuzo zonke izindawo ze-ecommerce, kepha izinsongo zokuphepha ziyehluka kuziteshi zonke. Lapho ukhetha i-PSP, qiniseka ukuthi banganikeza ukuphepha okuzinikele kwezinkokhelo zeselula, ngoba ukukhwabanisa okusebenzisa umakhalekhukhwini kuvame ukwehluka kunkohliso eyenziwe ku-inthanethi. Ukukhululeka kwenqubo yokukhokha yeselula nolwazi oluncane olufakwe ngumsebenzisi kungakhuphula ubungozi bokukhwabanisa, kwenze ezokuphepha zibaluleke kakhulu. Amasu okuphepha kwamaselula afaka phakathi ukulandelela amadivayisi nokufanisa indawo yawo namakheli wokukhokha nawokuthumela, kanye nokuhlaziya amadivayisi ngokuhamba kwesikhathi, ukuthola noma yikuphi ukuthengiselana okusolisayo noma umsebenzi.
5. Sebenza nePSP enikeza isisombululo esihlanganisiwe
Sikhulume ngokuthi ungenza kanjani ukuthi ulwazi lwamakhasimende lube ngcono, kepha kuthiwani ngawe? Njengomthengisi, uzofuna ukuthi inqubo yokukhokha yeselula ibe lula ukuphatha. Kuhle umhlinzeki wesevisi wokukhokha (I-PSP) izohlinzeka ngesisombululo esihlanganisiwe sazo zombili iselula nedeskithophu, ngezindlela ezahlukahlukene zokukhokha. Kufanele banikeze amathuluzi enza kube lula kuwe ukuhlanganisa izindlela zokukhokha zeselula. Lawa mathuluzi angabandakanya amakethi wokuthuthukisa ama-software nama-API wokukhokha weselula.
Inqubo enhle yokukhokha yeselula isho ukuklama umuzwa weselula ukuze uhambisane nezidingo zomsebenzisi weselula. Dala isayithi leselula elizinikele elibonisa isiza sakho sedeskithophu, bese usihlomisa ngezindlela zokuphepha nezindlela zokukhokha ezifanele, kumakhasimende ajabulisayo weselula, kanye nokuguqulwa okwandisiwe.
Tags: commerce mobilemobile friendlyizinkokhelo zeselulaukuphepha kweselulaukuthenga omni-channeli-psp
I-Infusionsoft Manje Ifaka Amakhasi Aphendulayo, Angenamakhodi, Hudula bese ulahla